प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन, देश निर्वाचनमा गइसक्यो रोक्छ कसले ? - Vishwanews.com
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदैन, देश निर्वाचनमा गइसक्यो रोक्छ कसले ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केपी ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार ओली निकट प्रेस संगठन नेपालको भेलालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको बजेटले नरोकिने बताएका हुन् ।
‘नेपाली समाज नयाँ निर्वाचनतर्फ गइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘तर अब प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन र हुनै सक्दैन। संविधानको धारा ७६ को ७ र धारा ८५ ले पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ।’
उनले वैशाखमा निर्वाचन भएरै छाढ्ने दावी गरे। ‘आगामी वैशाखको १७ र २७ गते निर्वाचन भएरै छाड्छ, हामी ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्माण गरेर छाड्छौँ।
मुलुकलाई अगाडि लैजान्छौँ’, ‘सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्न तयार छ भने निर्वाचन हुँदैन कसरी ?, निर्वाचन रोक्छ कसले’ उनले भने।
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जानका लागि अदालतको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतसहित देश सबैभन्दा ठूलो दल भन्ने उनको दाबी छ ।